【 အလှအပနှငျ့ကနျြးမာရေး 】မုနျ့ခြိုအိတျရောငျခွငျး (Pancreatitis) | Opinion Leaders
(၁)အစာခအြေငျဇိုငျးမြား ထုတျပေးခွငျးဖွငျ့ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ အရေးကွီးတဲ့ အစာခဖြေကျြခွငျး လုပျငနျးတှငျပါဝငျခွငျး
(၂)ခန်ဓာကိုယျ သကွားဓါတျကို အဓိက ထိနျးညှိပေးတဲ့ ဟျောမုနျးနှဈမြိုးဖွဈတဲ့ အငျဆူလငျနှငျ့ glucagon ဟျောမုနျးနှဈမြိုးကို ထုတျပေးခွငျး တို့ဖွဈပါသညျ။
မုနျ့ခြိုအိတျ ရောငျရမျးခွငျးမှာ ရုတျတရကျဖွဈတဲ့ ပနျကရိယ ရောငျရမျးခွငျး (Acute Pancreatitis) နဲ့ ကွာရှညျ ပနျကရိယ ရောငျရမျးခွငျး (Chronic Pancreatitis) ဆိုပွီး နှဈမြိုးခှဲနိုငျပါတယျ။
ဘယျအရာတှကေ မုနျ့ခြိုအိတျ (ပနျကရိယ) ရောငျခွငျးကို ဖွဈစသေလဲ?
Acute pancreatitis လို့ချေါတဲ့ ရုတျတရကျ ပနျကရိယရောငျခွငျးကို ဖွဈစတေဲ့ အခကျြတှကေတော့ -
-သညျးခွလေမျးကွောငျးကြောကျပိတျခွငျး သို့မဟုတျ Ampulla of Vater လို့ချေါတဲ့ သညျးခွလေမျးကွောငျးနဲ့ ပနျကရိယကထှကျတဲ့ ပွှနျတို့ဆုံရာ အဝ မူမမှနျဘဲ ကြုံ့နခွေငျး
-ERCP လို့ချေါတဲ့ သညျးခွလေမျးကွောငျးတလြှောကျ ရောဂါရှာဖှတေဲ့ မှနျပွောငျးကွညျ့ပွီးခြိနျတှငျ ဖွဈတတျခွငျး
-ခန်ဓာကိုယျတှငျး TG လို့ချေါတဲ့ အဆီတှေ အလှနျအကြှံမြားခွငျး
-Autoimmune ချေါ ရောဂါခုခံမှု စံနှုနျးမှာယှငျးပီး မိမိ ခန်ဓာကိုယျ တဈရှူးတှကေို ပွနျတိုကျခံရတဲ့ ရောဂါရှိသူတှေ
-အခြို့သော ဆေးမြား (ဥပမာ - ဆီးဆေး - thiazide နှငျ့ gliptins)
-အခြို့သော ဗိုငျးရပျဈပိုးဝငျခွငျးမြား (ဥပမါ-ပါးခြိတျရောငျ virus (mump)
(ဒီအရာတှကေ ပနျကရိယရဲ့ ခဖြေကျတဲ့ အငျဇိုငျးတှကေို အမြားကွီးထှကျစပွေီး ဒီအငျဇိုငျးတှကေ ပနျကရိယ နဲ့ အနီးအနားက တဈရှူးတှကေို ဖကျြပဈလို့ ရောငျရမျးစတောပါ) ဘာအကွောငျးရငျးမှ မရှိဘဲ idiopathic လို့ချေါတဲ့ ရောငျရမျးခွငျးလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ပနျကရိယ ရောငျရမျးရငျ ဘယျလိုရောဂါလက်ခဏာတှေ ခံစားရမလဲ?
Acutely ရုတျတရကျ ပနျကရိယ ရောငျးရမျးရငျတော့-
-ဗိုကျရဲ့ အပျေါပိုငျးမှာ နာရီပိုငျးကွာအောငျ ပွငျးပွငျးထနျထနျအောငျ့ခွငျး
- အူလှုပျရှားမှုနညျးခွငျး paralytic ileus
-ဗိုကျရဲ့ဘေးဘကျခွမျး flanks မှာ ညိုမညျးခွငျး (Grey Turner's sign)
-ခကျြ ပတျပတျလညျမှာ ညိုမညျးခွငျး (Cullen's sign)
Hypovolaemic shock ရတဲ့အထိ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
(၈၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျသော ပနျကရိယ ရောငျရမျးခွငျးတှကေ ပွငျးထနျလမေ့ရှိပမေယျ့ ၁၀ရါခိုငျနှုနျးလောကျကတော့ ဖွဈပီး ပထမအပတျအတှငျးမှာ အသကျအန်တရာယျရှိသညျအထိ ဖွဈနိုငျပါတယျ)
-ခန်ဓာကိုယျတကိုယျလုံးက အစိတျအပိုငျးတှေ ရောငျရမျးခွငျး (Systemic Inflammatory response syndrome, SIRS)
-ပနျကရိယတှငျ ပွညျတညျခွငျး (Abscess)၊ အရညျအိတျဖွဈခွငျး (Pseudocyst)
- ရဖေငျြးဖွဈခွငျး၊ အဆုတျရဝေငျခွငျး
-အစာအိမျလမျးကွောငျး အပျေါပိုငျးမှ သှေးထှကျခွငျး
-အသားဝါခွငျး (သညျးခွလေမျးကွောငျးကို ဖိမိခွငျးကွောငျ့)
- သှေးထဲမှာ serum amylase လို့ချေါတဲ့ အငျဇိုငျး ပမာဏ စဈဆေးခွငျး
-ဝမျးဗိုကျ အာထရာဆောငျး သို့မဟုတိ ကှနျပြုတာဓါတျမှနျ စီတီ ရိုကျခွငျး
-ရောဂါ ပွငျးထနျမှုအတှကျ လိုအပျတဲ့ သှေးစဈဆေးမှုမြားလုပျခွငျး
ပနျကရိယ ရောငျရမျးခွငျးဟာ အသကျအန်တရာယျရှိသညျအထိ ဖွဈနိုငျတာကွောငျ့ ရောဂါမွနျမွနျရှာဖှပွေီး ကုသဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ၁)အနာသကျသာအောငျ ဆေးပေးခွငျး၊
ရောဂါပွငျးထနျတဲ့ လက်ခဏာတှရှေိလာရငျတော့ အထူးကွပျမတျကုသဆောငျမှာ ကုသရသညျအထိ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
သညျးခွကြေောကျကွောငျ့ဖွဈတဲ့ ပနျကရိယရောငျရမျးခွငျး အတှကျတော့ မှနျပွောငျးဖွငျ့ ကြောကျထုတျခွငျး '(ERCP) လုပျဖို့လိုမှာပါ။ နောကျဆကျတှဲ ဆိုးကြိုးဖွဈတဲ့ ပွညျတညျခွငျး Abscess၊ တဈရှူးပုပျသှားခွငျးတှရှေိရငျတော့ ခကျြခငျြး ဖောကျထုတျပဈဖို့လိုမှာပါ။
မုန့်ချိုအိတ် (Pancreas) လို့ခေါ်တဲ့ အရာက ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အရေးကြီးတဲ့ ဒီလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
(၁)အစာချေအင်ဇိုင်းများ ထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အစာချေဖျက်ခြင်း လုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်ခြင်း
(၂)ခန္ဓာကိုယ် သကြားဓါတ်ကို အဓိက ထိန်းညှိပေးတဲ့ ဟော်မုန်းနှစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ အင်ဆူလင်နှင့် glucagon ဟော်မုန်းနှစ်မျိုးကို ထုတ်ပေးခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
မုန့်ချိုအိတ် ရောင်ရမ်းခြင်းမှာ ရုတ်တရက်ဖြစ်တဲ့ ပန်ကရိယ ရောင်ရမ်းခြင်း (Acute Pancreatitis) နဲ့ ကြာရှည် ပန်ကရိယ ရောင်ရမ်းခြင်း (Chronic Pancreatitis) ဆိုပြီး နှစ်မျိုးခွဲနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်အရာတွေက မုန့်ချိုအိတ် (ပန်ကရိယ) ရောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေသလဲ?
Acute pancreatitis လို့ခေါ်တဲ့ ရုတ်တရက် ပန်ကရိယရောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ အချက်တွေကတော့ -
-သည်းခြေလမ်းကြောင်းကျောက်ပိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် Ampulla of Vater လို့ခေါ်တဲ့ သည်းခြေလမ်းကြောင်းနဲ့ ပန်ကရိယကထွက်တဲ့ ပြွန်တို့ဆုံရာ အဝ မူမမှန်ဘဲ ကျုံ့နေခြင်း
-ERCP လို့ခေါ်တဲ့ သည်းခြေလမ်းကြောင်းတလျှောက် ရောဂါရှာဖွေတဲ့ မှန်ပြောင်းကြည့်ပြီးချိန်တွင် ဖြစ်တတ်ခြင်း
-ခန္ဓာကိုယ်တွင်း TG လို့ခေါ်တဲ့ အဆီတွေ အလွန်အကျွံများခြင်း
-Autoimmune ခေါ် ရောဂါခုခံမှု စံနှုန်းမှာယွင်းပီး မိမိ ခန္ဓာကိုယ် တစ်ရှူးတွေကို ပြန်တိုက်ခံရတဲ့ ရောဂါရှိသူတွေ
-အချို့သော ဆေးများ (ဥပမာ - ဆီးဆေး - thiazide နှင့် gliptins)
-အချို့သော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်ခြင်းများ (ဥပမါ-ပါးချိတ်ရောင် virus (mump)
(ဒီအရာတွေက ပန်ကရိယရဲ့ ချေဖက်တဲ့ အင်ဇိုင်းတွေကို အများကြီးထွက်စေပြီး ဒီအင်ဇိုင်းတွေက ပန်ကရိယ နဲ့ အနီးအနားက တစ်ရှူးတွေကို ဖျက်ပစ်လို့ ရောင်ရမ်းစေတာပါ) ဘာအကြောင်းရင်းမှ မရှိဘဲ idiopathic လို့ခေါ်တဲ့ ရောင်ရမ်းခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပန်ကရိယ ရောင်ရမ်းရင် ဘယ်လိုရောဂါလက္ခဏာတွေ ခံစားရမလဲ?
Acutely ရုတ်တရက် ပန်ကရိယ ရောင်းရမ်းရင်တော့-
-ဗိုက်ရဲ့ အပေါ်ပိုင်းမှာ နာရီပိုင်းကြာအောင် ပြင်းပြင်းထန်ထန်အောင့်ခြင်း
- အူလှုပ်ရှားမှုနည်းခြင်း paralytic ileus
-ဗိုက်ရဲ့ဘေးဘက်ခြမ်း flanks မှာ ညိုမည်းခြင်း (Grey Turner's sign)
-ချက် ပတ်ပတ်လည်မှာ ညိုမည်းခြင်း (Cullen's sign)
Hypovolaemic shock ရတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
(၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်သော ပန်ကရိယ ရောင်ရမ်းခြင်းတွေက ပြင်းထန်လေ့မရှိပေမယ့် ၁၀ရါခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့ ဖြစ်ပီး ပထမအပတ်အတွင်းမှာ အသက်အန္တရာယ်ရှိသည်အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်)
-ခန္ဓာကိုယ်တကိုယ်လုံးက အစိတ်အပိုင်းတွေ ရောင်ရမ်းခြင်း (Systemic Inflammatory response syndrome, SIRS)
-ပန်ကရိယတွင် ပြည်တည်ခြင်း (Abscess)၊ အရည်အိတ်ဖြစ်ခြင်း (Pseudocyst)
- ရေဖျင်းဖြစ်ခြင်း၊ အဆုတ်ရေဝင်ခြင်း
-အစာအိမ်လမ်းကြောင်း အပေါ်ပိုင်းမှ သွေးထွက်ခြင်း
-အသားဝါခြင်း (သည်းခြေလမ်းကြောင်းကို ဖိမိခြင်းကြောင့်)
- သွေးထဲမှာ serum amylase လို့ခေါ်တဲ့ အင်ဇိုင်း ပမာဏ စစ်ဆေးခြင်း
-ဝမ်းဗိုက် အာထရာဆောင်း သို့မဟုတိ ကွန်ပျုတာဓါတ်မှန် စီတီ ရိုက်ခြင်း
-ရောဂါ ပြင်းထန်မှုအတွက် လိုအပ်တဲ့ သွေးစစ်ဆေးမှုများလုပ်ခြင်း
ပန်ကရိယ ရောင်ရမ်းခြင်းဟာ အသက်အန္တရာယ်ရှိသည်အထိ ဖြစ်နိုင်တာကြောင့် ရောဂါမြန်မြန်ရှာဖွေပြီး ကုသဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ၁)အနာသက်သာအောင် ဆေးပေးခြင်း၊
ရောဂါပြင်းထန်တဲ့ လက္ခဏာတွေရှိလာရင်တော့ အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်မှာ ကုသရသည်အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သည်းခြေကျောက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ပန်ကရိယရောင်ရမ်းခြင်း အတွက်တော့ မှန်ပြောင်းဖြင့် ကျောက်ထုတ်ခြင်း '(ERCP) လုပ်ဖို့လိုမှာပါ။ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးဖြစ်တဲ့ ပြည်တည်ခြင်း Abscess၊ တစ်ရှူးပုပ်သွားခြင်းတွေရှိရင်တော့ ချက်ချင်း ဖောက်ထုတ်ပစ်ဖို့လိုမှာပါ။